Iindaba -I-XCMG, yaphinda yatyhila irenki!
Kutshanje, "izithuba zamagorha" eziwela isangqa sele zithandwa Nangona kunjalo, ngenxa yobude bayo kunye nobunzima bokwakha, uninzi lwabadlali abaphambili beTrenchless bahlala kude Sebenzisa amandla "njengelitye lokunyathela"
"Ilitye lokunyathela" lale projekthi ye-mega kukusebenza okubalaseleyo kwe-XCMG XZ6600 ethe tyaba yomkhombandlela wokugumba kule minyaka yegolide!
Njengegqala kumhlaba ongenamanzi, i-XCMG XZ6600 iyamangalisa ngamandla kwaye ayinakubekeka kwimeko yokulwa. Nge-Agasti ka-2020, sigqibe ngempumelelo ukunqumla ubude be-1833m kwisebe lase-Dongxing le-Sinopec exhasa umbhobho wegesi, kunye ne-drill yokuqala kwiprojekthi yokubeka umbhobho weSinopec ihambe kakuhle i-1200m.
Sebenzisa intsebenzo “njengombhalo”
Kule ndlela yokuwela umgama omde kakhulu, iqela leprojekthi le-XCMG lithathe uxanduva kunye noxanduva ngaxeshanye, kwaye indlela yokwakha kunye nenkonzo zaphunyezwa ngaxeshanye.
Isicwangciso sokwakha iirigs zokomba eziphindiweyo zamkelwe ekusebenziseni umkhombandlela. Ezi zixhobo zimbini zokugrumba kufuneka zigrunjwe kwiincam zombini ukuqinisekisa ukuchaneka kolawulo lolawulo. Kwinqanaba lokuphinda usebenze, iirigs zokomba ezijikeleziweyo zijikeleziswa kunye ukonyusa itorque kumgama omde kunye nokubonelela ngomlinganiso wodaka oguqulweyo kunye nesixhobo sokuguqula izixhobo ukuqinisekisa ulungelelwaniso lwezalathi ezahlukeneyo zokusebenza kunye nokunciphisa umngcipheko wokugcinwa.
Elothusa eli shishini kukuba iXCMG XZ6600 ayisebenzisanga itywina lombhobho xa irhuqa umbhobho. Kuxhomekeke kuphela kwindlela yokumiswa kwamanzi ukunciphisa ubunzima kunye nokukhuhlana kokugcinwa, ukuze zonke izinto ezinxibeleleneyo zidityaniswe ngokusondeleyo, kwaye ukugcinwa kube lula kakhulu. Okwangoku, le projekthi isingathe ngempumelelo ii-drill ezimbini, ixesha eli-avareji lenyanga e-1 kusombiwa.
Sebenzisa ukunyaniseka njenge "khadi yegolide"
“XCMG XZ6600 oxwesileyo oxwesileyo drill kunokuthiwa ukunceda ukuba ndidume! Umzi mveliso wokurhola iitoni ezinkulu kunzima ukuwenza, kwaye umngcipheko mkhulu. Ukusilela ukuthathela ingqalelo iinkcukacha kungakhokelela ekubeni ungaphumeleli ukugcinwa kwaye kubangele ilahleko enkulu. ”
Yoyisa udumo, qinisa kwaye ulole i-vanguard. Umnumzana Zhao, umthengi wale projekthi ikontraki, naye uthethe into ephuma entliziyweni yakhe.
Ukususela ekuthengweni kwezixhobo zokuqala ze-XCMG kwizixhobo ezikhulu, ishishini lethu labucala likholelwa kumashishini aphantsi korhulumente kunye nezibonelelo kunye neemveliso zomgangatho ophezulu eziziswe kuthi ziimpawu zesizwe!
Ukuba nguvulindlela kwaye ukhokele, njengoko "iqela lesizwe" loomatshini bokwakha, i-XCMG iya kunceda abathengi abaninzi abakhonza ilizwe kubunjineli kwaye babe lilizwe leprojekthi elinamandla, kwaye benze impumelelo engaphezulu!
I-hdd rig, Umatshini wokugrumba amaqula, Horizontal Directional Ukubhola Rig, umatshini wokugrumba i-hdd,